I-LOT Polish Airlines iqala kwakhona ngenkonzo yaseSeoul kwisikhululo senqwelomoya saseBudapest
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » isikhululo » I-LOT Polish Airlines iqala kwakhona ngenkonzo yaseSeoul kwisikhululo senqwelomoya saseBudapest
Airlines • isikhululo • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • IHungary Iindaba eziPhulayo • iindaba • Iindaba zasePoland • Ukwakha kwakhona • Iindaba zaseMzantsi Korea • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
Isikhululo senqwelomoya saseBudapest namhlanje ikubonile ukuphinda kuqalise inkonzo yayo ende ukusukela oko iindawo ezininzi zehlabathi ziye zema ngexesha Covid-19 isifo esikho elizweni jikelele. Ngokuthintelwa kokuhamba phakathi kweHungary neKorea, ULOTE Polish AirlinesUmsebenzi weveki ngeveki oya eSeoul Incheon ubuyile ukuze ahlangane kwakhona neemfuno ezibonakalayo zonxibelelwano phakathi kweBudapest neMpuma.
Njengoko intengiso phakathi kwesango laseHungary kunye nesikhululo seenqwelomoya esikhulu saseKorea safikelela phantse kubakhweli abali-100,000 2019 ngo-100-ukurekhoda ukukhula nge-2016% ukusukela ngo-50-inkonzo yenethiwekhi yeflegi idlala indima ebalulekileyo ekubuyiseni ubudlelwane bezoqoqosho phakathi kwala mazwe mabini. Yonyusa umthamo wezithuthi zedolophu nge-XNUMX% ebusika ophelileyo, ukusebenza kweLOT kuya kuba ngumdlali ophambili kubuyiso mali lwangaphakathi oluvela eKorea luye eHungary.
“Xa sasungula ikhonkco elibalulekileyo leLOT phakathi kweBudapest neSeoul ngoSeptemba odlulileyo, sidale ibali eliyimpumelelo. Namhlanje akupheleli nje ekubuyiselweni kweenkonzo zothutho olude eBudapest, kodwa kwanokubuya kokuzithemba kwisikhululo sethu seenqwelomoya kunye nokuhamba ngenqwelomoya, ”ucacisa uBalázs Bogáts, iNtloko yoPhuhliso lweeNqwelo moya, iBudapest Airport. “Ukutsala umxube olungeleleneyo weshishini, ulonwabo kunye nabakhweli beVFR, iLOT ifumene imithwalo ephezulu kulo lonke ixesha lasebusika elidlulileyo. Njengokuba imfuno yexesha elizayo sele ibonakalisa isidingo sokwandisa umthamo, asithandabuzi ukuba indlela iya kufezekisa iziphumo ezifanayo ukuya phambili. ”
Kulo nyaka, ngokubhekisele kuzo zonke izikhululo zeenqwelo moya, ubhubhane we-COVID-19 wehlabathi ube nefuthe elibonakalayo eBudapest kodwa, njengoko isango liqala ukwakha ngokutsha ukugcwala kwabahambi, ukubuyiselwa kweendlela ezibalulekileyo ezinxulumene nekhonkco leLOT ukuya eSeoul luphuhliso olubalulekileyo ekoyiseni ukwehla.